ခံစစ်မှူး မခေါ်ရင် လိဂ်ဖလား ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လီဗာပူးကို သတိပေးခဲ့တဲ့ ကာရေဂါ – MySport Myanmar
ခံစစ်မှူး မခေါ်ရင် လိဂ်ဖလား ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လီဗာပူးကို သတိပေးခဲ့တဲ့ ကာရေဂါ
လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ခံစစ် ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်သူ ဂျေမီ ကာရေဂါ က မကြာသေးခင်က ဆောက်သမ်တန် အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ပုံစံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့ ကြိုးကြာနီတွေ အနေနဲ့ ဇန်နဝါရီ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့မှာသာ ခံစစ် ဗဟို ကစားသမား ကို မခေါ်ယူရင် ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဂျာဂျန် ကလော့ပ် ရဲ့ လီဗာပူး အသင်း အနေနဲ့ ဆောက်သမ်တန် အသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအနေနဲ့ နောက်အပတ်မှာ ကစားမယ့် ဘန်လေနဲ့ ပွဲစဉ်မှာသာ အနိုင်ရခဲ့ရင် အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်း အနေနဲ့ တနင်္လာနေ့ညက စိန့်မေရီ မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျော်ဒန် ဟန်ဒါဆန် ကို ဗဟိုခံစစ် နေရာမှာ ပွဲထုတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ကာရေဂါ ကတော့ လီဗာပူး အသင်းအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ အသင်းကို ပြန်လည် မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ရင် ဒီရာသီ ချန်ပီယံ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ အကယ်၍သာ လီဗာပူး အသင်းအနေနဲ့ ဗဟိုခံစစ် မဝယ်ရင် ဒီရာသီ လိဂ်ဖလားကို ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ့ စကားကို ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲစဉ်ပြီးကတည်းက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကယ်၍သာ သူတို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ မခေါ်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါက ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ”
“ သူတို့ ဂျော်ဒန် ဟန်ဒါဆန် ကို ဗဟိုခံစစ်နေရာမှာ ကစားခိုင်းတာက အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟန်ဒါဆန်က ဗဟိုခံစစ် ကစားသမား မဟုတ်ပါဘူး။ သူ အကောင်းဆုံးတော့ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက သူ့ရဲ့နေရာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပွဲမှာ လီဗာပူး အသင်း ရလဒ်ဆိုးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ နောက်ထပ်ဆိုးဝါးတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲထပ်ကြုံခဲ့ရပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီရာသီ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ အဝေးကွင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကိုကြည့်လိုက်တော့ အတော်လေး အခြေအနေဆိုးနေတယ်၊ ဟုတ်တယ်မလား ? သူတို့ ဆောက်သမ်တန် ကို ဂိုးသွင်းနိုင်ပုံတောင် မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ဂိုးသမားတွေ အနေနဲ့ ကောင်းတဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ဒါမှမဟုတ် ကြီးမားတဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လား ? တစ်ယောက်ယောက်များ ဂိုးသွင်းဖို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့သလား ? ဒါဟာ လီဗာပူး အတွက်တော့ အခုချိန်မှာ တကယ်ကို စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ လုံလုံလောက်လောက် ကောင်းဖို့ ဘယ်လိုမှ မနီးစပ်ခဲ့ပါဘူး ” လို့ ဆောက်သမ်တန် နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ Sky Sport ကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2021-01-05T20:32:58+06:30January 5th, 2021|Champions League, Football, Premier League|